ကောင်းသောအမှု (Good Works) | Local Resources Centre
ကောင်းသောအမှု (Good Works)
သူမအမည်မှာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေးဖြစ်ပြီး သူမသည် အမျိုးသမီးများစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အသင်းသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ ယင်းအသင်းသည် အမျိုးသမီးများအတွက် လိုအပ်သော နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများကို ပေးသည်သာမက မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲခံရသော အမျိုးသားများအတွက်ပါ ရပ်တည်ပေးလျက်ရှိသော အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Daw Win Win Htay was sharing her knowledge in the workshop
“စီမံကိန်းအမည်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းကာလတွင် အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားလာပြီး အခွင့်အရေးပိုမိုသိရှိလာရန်” ဖြစ်ကြောင်း သူမမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲစဉ် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်စဉ် ကာလတစ်လျှောက်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသာ စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ဤသို့ပြောပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပြီး ၎င်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အသင့်ဖြစ်နေစေကာမူ တစ်စုံတစ်ဦးမျှ ယင်းစီမံကိန်းကို အားပေးထောက်ခံမှုမရှိကြောင်း ၊ သို့ရာတွင် သူမသည် ဘေးလူများမှပြောသော အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော ဝေဖန်ချက်များကို လျစ်လျူရှုရင်း စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
သင်တန်းလာရောက်တက်ရောက်သော သင်တန်းသူတစ်ဦး၏ မောင်သည် ကလေးတစ်ဦးရှိအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် နေအိမ်မှ ဆင်းသွားသောကြောင့် အမျိုးသမီးဖြစ်သူမှ နစ်နာကြေး သိန်းတစ်ရာတောင်းဆိုခဲ့သည့် ကိစ္စကို အမျိုးသမီးများစွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ အောင်မြင်စွာဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထို့အပြင် မူးယစ်ဆေးစွဲကာ ဆေးဖြတ်ချင်သော လူငယ်တစ်ဦးကိုလည်း မူးယစ်ဆေးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသော အကြံဉာဏ်များကို ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
Her name is Daw Win Win Htay. She is working asaleader in Women Empowerment Group (WEG). The office is located in Kawkereit township, Kayin State. WEG is functioning asaconsulting and networking body for not only women but also men in the village if they have been unfairly accused.
The project name aims to promote “Women’s rights and capacity building in democracy transition”, she said. After successfully competing to receive small grant through PEACE project, she worked hard to overcome all the challenges during proposal development and implementation stage.
Some of the achievement of WEG include, providing psycho social counseling and legal aid services forawoman to receive compensation of 100 lakhs from her husband asadivorce settlement. Additionally, the WEG also assist in rehabilitating drug uses.